नीति योजना आयोग सदस्यमा डा. अधिकारी | eAdarsha.com
नीति योजना आयोग सदस्यमा डा. अधिकारी
सदस्य अधिकारीलाई आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले सोमबार सपथ ग्रहण गराए । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काको उपस्थितिमा उपाध्यक्ष काफ्लेले सपथ गराएका हुन् । सपथमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला, मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी थिए
३८ वर्षे अधिकारी युनिभर्सिटी अफ चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेजबाट वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधि हुन् । उनी भारतको बैंगलोर युनिभर्सिटी भारतबाट माइक्रो बायोलोजीमा स्नातक गरेका छन् । युनिभर्सिटी अफ चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेजबाट एक्सलेन्ट इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अवार्डसमेत प्राप्त गरेका छन् । उनीसँग जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस पोखराको माइक्रोबायोलोजी र बायोलोजी विभाग प्रमुखको कार्यानुभव छ । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा विज्ञान प्रविधि तथा अन्य विषयहरुमा अनुसन्धानमूलक दर्जनौं लेख प्रकाशन गरेका छन् ।
उक्त अवसरका मुख्यमन्त्री पोखरेलले युग सुहाउँदो व्यावहारिक नीति बनाउन युवा जोश प्रयोग गर्न आग्रह गरे । ग्लोबल भिलेजको अवधारणा सर्बव्यापी भएको अहिले अवस्थामा त्यसै अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम र योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
आफ्नो अध्ययनको क्षेत्र अनुसार अनुभवको प्रयोग गर्दै प्रदेशलाई अझ अब्बल बनाउने प्रतिबद्धता सदस्य अधिकारीले जनाएका छन् । आयोगमा असार ५ गते नै उपाध्यक्षमा तनहुँका डा. रघुराज काफ्ले नियुक्त भएका छन् । ३ सदस्यीय आयोगमा १ पद अझै खाली नै छ ।